कसरी राम्रो रातको आरामको लागि निदाउन सकिन्छ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट जेनिस | नोभेम्बर 16, 2019 | सो, स्वास्थ्य र कल्याण |0|
1 कसरी इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू बन्द गरेर निदाउन
1.1 किन हामीलाई राम्रो रातको निद्रा चाहिन्छ
1.2 कसरी निदाउने
1.2.1 कसरी राम्रो खाना खाएर निदाउने
1.2.2 कसरी डिटक्सिंग गरेर निदाउन
1.2.3 कसरी सही वातावरण सिर्जना गरेर निदाउन
के हामी निदाउने बिर्स्यौं? यो एक पागल प्रश्न जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो जस्तो मूर्ख जस्तो देखिन्छ।
यसको अनुहारमा, हामी सबैलाई निदा कसरी जान्दछौं। हामी ओछ्यानमा जान्छौं, आँखा बन्द गरेर सुत्न सक्छौं। वा त तपाइँ सोच्नुहुन्छ।
कसरी इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू बन्द गरेर निदाउन
अहिले त्यहाँ धेरै अलमल्याउने कुराहरू छन् जुन धेरै व्यक्तिहरू निदाउन र सुत्ने सही मात्रामा समस्या भोगिरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो अपराधीहरूमध्ये स्मार्टफोन वा मोबाइल उपकरणहरू, भिडियो गेमहरू, सामाजिक मिडिया र इन्टरनेट हुन्। लगभग percent० प्रतिशत बच्चाहरू between - १ between बिचको सुत्छ उनीहरूको बेडरूममा कम्तिमा एउटा इलेक्ट्रोनिक उपकरणको साथ।
अनुसार Sयन.org “सेल फोन, ट्याबलेट, कम्प्युटर र अन्य इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू हाम्रो दैनिक जीवनको यति ठूलो हिस्सा भएको छ कि तिनीहरूलाई राख्न अक्सर गाह्रो हुन्छ - सुत्ने बेला पनि। तपाईंको नाईटस्ट्यान्डमा तपाईंको फोन राख्नु ठूलो सम्झौता नहुन सक्छ, तर टेक्नोलोजीले तपाईंको निद्रालाई तपाईंले महसुस गरेको भन्दा बढी तरिकामा असर गर्छ। चाहे तपाईं वेब सर्फ गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो गेम खेल्दै हुनुहुन्छ, वा बेलुका बेलुका तपाईंको फोन अलार्म घडीको रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं आफैंलाई आरामदायी रातबाट बचाउनुहुनेछ।
लेखले कसरी पर्दाको नीलो प्रकाशले हर्मोन मेलाटोनिनको उत्पादनलाई रोक्छ भनेर वर्णन गर्दछ। किनभने मेलाटोनिनले तपाईंको निद्रा चक्र नियन्त्रण गर्दछ, melatonin कम गर्नाले यसलाई झर्नु र निदाउन गाह्रो बनाउँदछ।
यदि तपाईं आफ्नो सेल फोन प्रयोग गर्नुहुन्न भने पनि, यसले तपाईंको निन्दनलाई हानी पुर्याइरहेको छैन भन्ने होइन। अबेर रातको पाठहरू, ईमेलहरू, सूचनाहरू वा अन्य रिमाइन्डरहरूको लगातार पिंग गर्नु भनेको पहुँचको भित्रमा मोबाइल हुनु भनेको तपाईंको निद्रामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
किन हामीलाई राम्रो रातको निद्रा चाहिन्छ
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि हामी राम्रो रातको निन्द्रा पछि राम्रो प्रदर्शन गर्छौं। एक स्वस्थ वयस्कको लागि दिनको7- hours घण्टा निन्द्रा चाहिन्छ। बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूलाई तिनीहरूको शरीर बढ्दै र परिवर्तन हुँदै जान अझ धेरै आवश्यक छ।
राम्रो स्वस्थको लागि शरीरको लागि आवश्यक रखरखाव र मर्मत कार्य गर्नको लागि रातको राम्रो निद्रा लिनु आवश्यक छ।
जेनिस अलेक्ज्याण्डर २००२ देखि स्वास्थ्य अध्ययन गर्दै छ। अर्को लेखले निदाउनको लागि सल्लाह र जानकारी प्रदान गर्दछ। यसलाई कसरी हाम्रो आहार, दिनचर्या र वातावरण सम्बोधन गर्न सकिन्छ पत्ता लगाउन पढ्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले बुझ्नुभयो कि तपाईंलाई निदाउन कसरी मद्दत गर्दछ, तपाईं आफ्नो निन्द्रा समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।
जेनिस अलेक्ज्याण्डर द्वारा
आज धेरै मानिसहरू निन्द्राबाट पीडित छन् र यो महामारी बन्न गइरहेको छ किनकि यो अत्यन्त बृद्धि भइरहेको छ।
विगतको 10 वर्षमा अनिद्रा कमसेकम 4-گنا बढेको छ। जब तपाईं निन्दनबाट वञ्चित हुनुभयो तपाईंलाई आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नमा कठिनाई हुन्छ र तपाईं पूर्ण रातको निद्रा भएको बखत तपाईं आफ्नो मस्तिष्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
निन्द्रा कायाकल्प र पुन: प्राप्ति र मर्मतको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ। पर्याप्त निन्द्रा बिना तपाई बिरामीबाट बिस्तारै स्वस्थ हुनुहुनेछ र चाँडो उमेर चाँडो।
तपाईंको आदर्श स्वस्थ जीवनको कल्पना गर्नुहोस्। तपाई राम्ररी निदाइरहनुहुनेछ, नयाँ संसारमा ताजा, ऊर्जावान, र सतर्क भई काम गरिरहेको दिमाग र मेमोरी रिकलको साथ। तपाईं ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ र काम सजिलोसँग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो तपाईंलाई जागृत राख्न औषधी र कफी लिने जीवन नहुन सक्छ। वा ऊर्जाको लागि प्रशोधित चिनी खाँदैछ र रातको निदाउन निद्रा गोलीहरू लिनुपर्दछ।
यदि तपाईंसँग बिहान पर्याप्त ऊर्जा छैन भने तपाईंको एड्रेनल ग्रंथिहरू समस्या हुनसक्दछन् किनकि तिनीहरूलाई राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न आवश्यक पर्ने चीजहरू दिइएको छैन।
कसरी राम्रो खाना खाएर निदाउने
हामी स्वादको लागि खान्छौं, पोषणको लागि होइन र त्यसैले हामी यो सबै समस्यामा पर्दछौं। यदि हामीले हाम्रो एड्रेनललाई पोषण दियौं भने हामीलाई चिनी चाहिने थिएन र हामीलाई उत्तेजित गर्न कफीको आवश्यकता पर्दैन।
केहि मानिसहरु लाई दुखाइको कारण निदाउन समस्या हुन्छ। त्यसो भए तपाईंले राम्रो निद्रा प्राप्त गर्न सबैभन्दा पहिले चीज गर्नुपर्दछ दुखाइ कम गर्नु। दुखाइ कम गर्ने उत्तम तरिका भनेको भनेको विरोधी भोज खानाहरू हो।
राम्रो निद्रा पाउनको लागि त्यहाँ केहि नियमहरू छन् निन्द्रा स्वच्छता जुन पालना गर्नु आवश्यक छ।
तपाइँ जे गर्नुहुन्छ सबै गर्नुहुन्छ, तपाइँ राम्रो गर्नुहुन्छ जब तपाइँसँग पर्याप्त निद्रा भएको छ। सही पोषण बिना नै निन्द्रा भ्रमपूर्ण हुनेछ, त्यसैले खाना पहिले हुनुपर्छ।
हाम्रो वातावरणबाट विषाक्त पदार्थहरूले निद्रा पनि अवरोध पुर्‍याउन सक्छ। शरीरमा हुने सबै मेटाबोलिक प्रक्रियाहरूको लागि म्याग्नीशियम र भिटामिन डी दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। म्याग्नेशियम 300 भन्दा बढी मेटाबोलिक प्रक्रियाहरूमा संलग्न छ। भिटामिन डी शरीरमा प्रत्येक चयापचय प्रक्रियामा समावेश छ; हड्डीहरूलाई बलियो बनाउनका लागि मात्र होईन।
यी दुई पोषक तत्वहरू शरीरको सबै कामका लागि आधार हो जुन हामीलाई चाहिन्छ। र त्यहाँ अधिक लोडहरू छन् - ओमेगा's को जस्तै, पोटेशियम, भिटामिन सी, क्याल्सियम, सेलेनियम जुन हामीलाई गहिरो पुनःस्थापनात्मक निद्राको लागि आवश्यक छ।
उत्तम कुरा भनेको वास्तविक खाना खानु हो। वास्तविक खाना खाने फाइदा मात्र राम्रो निन्द्रा हो। तपाईं पनि अन्य पोषकहरू को एक भीड प्राप्त कि एक जैव उपलब्ध फार्म संग आ।
कसरी डिटक्सिंग गरेर निदाउन
विषाक्त रसायन र भारी धातुहरूको डेटोक्स तपाईंको प्रणालीबाट बाहिर गर्नुहोस् किनभने उनीहरूले तपाईंको निद्रा चक्रमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछन्।
तपाईं तेल पुलिंग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि उठेको समयमा - केहि खानु वा पिउनु अघि - तपाई नारियल तेल वा सूर्यमुखी तेल वा कुनै अन्य चिसो प्रेस गरिएको जैविक तेल तपाईको मुख वरिपरि २० मिनेट सम्म सफा गर्नुहुन्छ र थुक्नुहुन्छ। के छैन निल्नु तपाईं जे गर्नुहुन्छ, किनभने यसले तपाईंको शरीरबाट तेलमा विषाक्त पदार्थहरू समावेश गर्दछ।
तेल खींचने काम धेरै संस्कृतिमा गठिया, एनजाइना र अन्य लक्षणहरूको सम्पूर्ण ढेर सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
तपाईंसँग पर्याप्त मात्रामा भिटामिन सी र सेलेनियम छ भनेर निश्चित गरेर तपाईंको एड्रेनल ग्रन्थीहरू पोषण गर्नुहोस्। दिउँसो पछि कफीमा फेरि काट्नुहोस् र तपाईंको तनाव स्तर कम गर्नुहोस्।
कसरी सही वातावरण सिर्जना गरेर निदाउन
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ओछ्यान आरामदायक छ र विषाक्त रसायनको ग्यास गर्न बन्द छैन, यसको अर्थ जैविक कपास जस्ता प्राकृतिक कपडा हो। तपाईंको तकिया सहि मोटाईमा हुनुपर्दछ ताकि जब तपाईं आफ्नो छेउमा सुताउनु भयो भने तपाईंको मेरुदण्ड सीधा र स्तरमा रहन्छ र तपाईंको टाउको एक छेउमा झुकाइएको हुँदैन र तपाईंलाई बिहान एक टेढो घाँटीको सिकार बनाउँछ।
के तपाईं ना naked्गो हुनुहुन्छ वा रातको कपडा वा तपाईंको अंडरवियर र उनीहरू कुन कपडाबाट बनेका छन्? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको छालाको छेउछाउको कपडा प्राकृतिक छ र नाइलन रेयान वा अन्य कुनै मानव निर्मित कपडाहरूबाट बनाइएको होईन।
ना naked्गो निदाउनु भनेको2लिटर पसिना जुन हामीले हरेक रात गुमाउछौं ओछ्यानको पानाहरूमा भिजाईनेछ र तिनीहरूलाई तपाईं अक्सर रातको लुगा लगाएको भन्दा बढी परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
हामीले रातमा गुमाउने पसिनाको मात्रा एक रातदेखि अर्कोमा फरक हुन सक्छ। यो धेरै कारणहरूको लागि हुन सक्छ, हामी ओछ्यानमा अलि धेरै पियौं वा हामी धेरै तातो छौं।
हामीले विषलाई पसीना खानुपर्दछ किनकि शरीरको प्रदूषणको समाधान कमजोर पार्न सकिन्छ। अधिक विषाक्त पदार्थहरूको तपाईंले छुटकारा पाउन आवश्यक छ तपाईंले पसिना बढाउनुहुनेछ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् अधिक जानकारी र निदाउन कसरी सल्लाह मा।
अरूहरूका लागि उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या हुन सक्छ कसरी छिटो निदाउन। यदि तपाईंलाई सुत्न समस्या भइरहेको छ भने, तपाईं एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्न जसलाई निदाउन मद्दतको आवश्यक पर्दछ। यी5सुझावहरूले तपाइँलाई अझ राम्रो निद्रामा मद्दत गर्न सक्छ.
पछिल्लोतपाईको सही क्यारियर पत्ता लगाउन निःशुल्क क्यारियर परीक्षण लिनुहोस्
अर्को5 सुझावहरू तपाईंको किशोरीलाई नाग बिना नै उत्प्रेरित गर्न को लागी
CBD मेडिकल भांग तेल को फाइदा
वजन घटाउन सम्मोहन